EcubWare 4.2.1 Ntuziaka - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Echiche nke Abụọ
EcubWare 4.2.1 Ntuziaka
Bụrụ onye na-ere ahịa
Gara aga weebụsaịtị
Ntuziaka Ọrụ Software
1.System gburugburu nwụnye na mmalite
1.1 Gburugburu Gburugburu
1.2 Wụnye OpenGL
1.3 Wụnye NET Framework 3.5
1.4 Wụnye EcubWare
2.FDM 3D Printing Ọrụ
2.1 Okwu Mmalite nke Okwu
2.2 Ogwe NchNhr
Njikwa 2.3 Printer
2.3.1 Buru ụzọ jiri EcubWare
2.3.2 Họrọ Onye nbipute site na NchNhr
2.4 Mbubata Mbadamba
2.4.1 Ihe nlere site na NchNhr
2.4.2 Mbubata bykpụrụ site na Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ
2.4.3 Bubata bykpụrụ site na Mouse Drag
2.5 Ntọala oke nhazi
2.6 Ntọala oke maka Mbipụta
2.6.1 Ntọala akwadoro
2.7 Iberibe na Chekwa
2.8 Ọrụ Ntugharị Kwesịrị Ekwesị
2.9 FDM Single Agba 3D Printing
2,10 FDM Dual-Agba 3D Printing
3. Ọrụ Nrụ Ọrụ Ọrụ
3.1 Mepee Ọrụ Laser site na NchNhr
3.2 Format Image Hazi
3.3 Okwu Mmalite nke Okwu
3.4 Format Image Hazi
3.5 Nzọụkwụ Nzọụkwụ Mbupụ Mbupụ
3.6 Bipute Ọsọ Enyemaka Uru Uru
4. Ọrụ Ntanetị CNC
4.1 Mepee CNC ọrụ site na NchNhr
4.2 Okwu nke Oru
4.3 Bubata Vector
4.4 Bubata Bitmap
4.5 Bubata Gcode
4.6 Mepụta ederede Omenala
4.7 Mepụta Ọdịdị
4.8 Mepụta Embossed
4.9 Nsogbu na Ngwọta Ya
4.9.1 Enweghị ike imeghe Faịlụ Vector
4.9.2 Gcode nke Bitmap Njikwa nwere oke
5.1 Nke a to English
5.2 Bekee rue Chinse
"Ecubware" bụ sọftụwia na - arụ ọrụ ọtụtụ arụ ọrụ nke gụnyere ọrụ FDM 3D Printing, Ọrụ Ọrụ Laser na arụ ọrụ CNC. Ihe ngwanrọ niile emere (*. Gcode) dị maka ụdị TOYDIY nke EcubMaker mere, ihe eji aba uru nwere uru nke mgbanwe mgbanwe nke arụmọrụ, ngwa ngwa ngwa ngwa na ụzọ ụzọ ezi uche dị na ya, yana ọrụ dị ike nke nhụsịrị ngosi nke usoro 3d. na ụzọ ngwaọrụ.
Windows na-agba ọsọ gburugburu ebe obibi: Windows 7 ma ọ bụ karịa.
Njikọ njikọ: IZIR recommendedTA na-atụ aro
Kaadị eserese: Nkwado OpenGL
OpenGL bụ cross-platform, cross-platform application program interface maka ịsụgharị 2D na 3D vector Graphics. Eji mee ihe ngosi ihe omimi di omimi site na ihe ochie. Ọ bụrụ na e nweghị"Opengl 2.0" ma ọ bụ n'elu mbanye maka eserese kaadị na kọmputa onye ọrụ, ọ ga-emetụta mmeghe na ojiji nke software EcubWare. Na mkpokọta, ụdị nkwụnye nkwụnye ndabara na-adịkarị ala mgbe arụnyere sistemụ, dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ na-esonụ.
Họrọ ihe ngosi nkwụnye (ngosipụta izizi mgbe nwụnye sistemụ: Ihe nkwụnye nkwụnye ngosipụta nke Microsoft)
Na-enweghị ọkwọ ụgbọala OpenGL, njehie na-esonụ na-apụta mgbe ị na-agba software EcubWare.
Melite ọkwọ ụgbọ ala ahụ. Ndị na-esonụ bụ ụzọ isi dozie nsogbu ahụ.
Bugharịa òké “Chọọ weebụ na Windows”
Ntinye “Njikwa Ngwaọrụ”
Gbapụta "Ngwaọrụ Manager"
Họrọ “Ngosipụta nkwụnye” na “Microsoft Basic Display Adapter”
（Ndabere ngosipụta mgbe usoro echichi："Ihe Ngosipụta Ngosipụta Ngosipụta Microsoft"）
Pịa aka nri iji melite ọkwọ ụgbọ ala
(Kọmputa kwesịrị ijikọ na Internetntanetị)
pịa “Chọọ na-akpaghị aka maka emelitere ọkwọ ụgbọala software”
Na-achọ ntanetị maka ngwanrọ ...
Nbudata akụrụngwa akụrụngwa mgbe achọtara
Wụnye akụrụngwa akụrụngwa mgbe ebudatara
Echichi ahụ gara nke ọma ma gosipụta aha kaadị eserese ziri ezi
Mgbe ahụ lelee ịhụ ma ọ bụrụ na software na-emeghe ọma
Ọ bụrụ na imeghe ya nke ọma, nsogbu ahụ egboro. Ọ bụrụ na enweghị ike imeghe, ọ nwere ike bụrụ na kaadị eserese anaghị akwado OpenGL ma ọ bụ nsogbu ndakọrịta ọzọ.
Ọ bụrụ na etinyeghị NET Framework 3.5 ma ọ bụ karịa, ihe ndị na-esonụ na-agbapụta mgbe ị na-agba ọsọ Ọrụ Ọrụ Laser , dị ka e gosiri n'okpuru
Wụnye NET Framework 3.5 na n'elu site na ngwọta 2: Mgbe kọmputa gị na-ejikọ na ịntanetị, Pịa "Download ma wụnye atụmatụ a" dịka e gosipụtara na foto dị n'elu. Mgbe ịpịchara, ọnọdụ ndị a ga - apụta ruo na njedebe nke nwụnye.
Nzọụkwụ 1: ugboro abụọ pịa echichi ngwugwu， Njikwa onwe-wepụ ...
Ọ ga-elele ihe atọ, ọdịda ọ bụla ga-ebute ọrụ na-adịghị mma nke sọftụwia EcubWare. Ọ bụrụ na ịlele ọ dị mma, ịnwere ike pịa “Nzọụkwụ Ọzọ”, ma ọ bụ pịa “Kwụfee” gaa nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 2: Mgbe ịtọsịrị ụzọ ahụ, pịa ọzọ
Nzọụkwụ 3: Pịa ọzọ
Kwụpụ 4: Họrọ ihe ịchọrọ ịwụnye. Ọ bụrụ na nke a bụ nrụnye izizi, họta nhọrọ niile ịkwesịrị ịwụnye. Wee pịa "Wụnye"
Isi nbipute eji na modul a gụnyere TOYDIY 4in1 3D Printer（TOYDIY 4in1 FDM Ngwá ỌrụHead / TOYDIY 4in1 FDM-Dual ToolHead））FANTASY PRO4 na TOYDIY 4in1 3D Printer 2.0（TOYDIY 4in1 FDM Ngwá ỌrụHead / TOYDIY 4in1 FDM-Dual ToolHead）
Isi interface na-agụnye "Ntọala Ntọala", "Ntọala ntọala mmanya", "Lee Ogwe" na "Ogwe ihe nlele akara". Nwere ike ịgbanwe ihe nbipute ihe ọmụma na Menu mmanya ma mepee ọkachamara ntọala. Ntọala ntọala bụ mpaghara arụ ọrụ kachasị, ebe onye ọrụ na-abanye na akụkụ dị iche iche dị mkpa maka ịkpụ na -emepụta faịlụ G-Code ka mma dabere na akụkụ ndị a. A na-ejikarị elele iji lelee ụdị, tinye ụdị, usoro njikwa, ụzọ ụzọ ncha, lelee nsonaazụ ibe.
The ọrụ tumadi na-agụnye imeghe na-azọpụta ụdị faịlụ, mwube oke, na-agbakwunye nlereanya, enyemaka na na.
Oge mbu EcubWare meghere, igbe nzere "Tinye Printer" putara. Dịka e gosiri n'okpuru, họrọ aha onye nbipute nke dabara na nkụnye eji isi mee ihe achọrọ. Ndabara bụ "TOYDIY 4in1 FDM ToolHead" (isi ihe eji eme FDM).
Mepee interface sọftụwia, na menu menu, "Tinye Ndị na-ebi akwụkwọ", gbakwunye ngwa nbipute ịchọrọ.
Sọftụwia ahụ nwere ọtụtụ ụzọ iji bubata ụdị ahụ, ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ịbubata ụdị dịka nhọrọ si dị.
“Faịlụ ”-” Mepee faịlụ (s) ”
Chọta ogwe ngwaọrụ n'akụkụ aka ekpe nke ngwanrọ ahụ ，n'etiti,
Bubata ihe nlereanya. Nwere ike ibudata ụdị 3d n'ụdị dị iche iche, dịka stl, obj, Dae, na AMF. Ma ọ bụ ịnwere ike iji faịlụ Ibu Ibu site na menu Njikwa, ma ọ bụ ịnwere ike iji CTRL + l. Ibu ibu a kamel faịlụ, na software nwere ike ime mgbanwe ụfọdụ na nlereanya, dị ka nsụgharị, adiana, ịkpụzi, mirroring.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. Enwere ike ibudata ụfọdụ ozi na ibe obibi.
Ihe nbudata ihe. Na ibe, ị nwere ike ibudata ụfọdụ *. ụdị faịlụ na * .STL usoro
Mbubata a nlereanya, pịa ihe nlereanya echekwara na kọmputa gị na ịdọrọ ihe nlereanya n'ime isi interface nke EcubWare.
Maka mmụba nke nsonaazụ mbipụta zuru oke, achọrọ idozi ihe atụ ahụ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị na ogo ya. Ndị ọrụ nwere ike ịme nke a site na iji "Ogwe ihe eji eme ihe nlereanya" ..Nke a bụ otu o si arụ ọrụ：
Bugharịa: Akwụkwọ nlele na mpaghara ele bụ mpaghara ebe a na-ebipụta akwụkwọ. Pịa ma jideBọtịnụ ekpe ekpe na àkụ áká na ịkwaga Up-Down, Left-Right ka ịtọgharịa positiondị gị na Platform. Jiri Pịa ma JideAka nri Oke ka Bugharia dum n'elu ikpo okwu. enwere ike idowe ihe nlereanya n'ebe ọ bụla. BughariaKé Moise ka Mbugharị-Na, Bugharịa-Nleta ihe nlereanya iji hụ nkọwa nlele.
N'ọtụtụ: Scdị Mgbanwe Nlereanya, setịpụrụ pasent kwesịrị ekwesị. Ozugbo ahọpụtara ihe nlereanya ahụ, pịa bọtịnụ n'ọtụtụ na ị ga-ahụ oghere atọ na elu ihe atụ ahụ na-anọchi anya axes X, Y, na Z. Pịa ma dọrọ igbe iji tụọ ihe nlereanya ahụ site n'ọtụtụ otutu. I nwekwara ike tinye ihe mbugharị na igbe mbugharị igbe, igbe aka nri nke "Ọkwa". I nwekwara ike tinye uru Ogo bara uru na igbe ntinye Size, nke bụ igbe dị n'akụkụ aka nri nke "Size *", na-ejide n'aka na ị maara akụkụ ndị na-anọchi anya ihe nlereanya ahụ na axis ọ bụla. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ekewa ọkwa"Uwe ejiji na akwa" , ndabara eji edo edo edo, ya bu, menu na-abawanye na onodu mkpọchi. Iji jiri edoghi edo edo, pịa igodo. Ngwongwo a na-ejikọghị ọnụ nwere ike ime ka otu cube ghọọ cuboid. Tọgharia ga-eweghachite ihe nlereanya ahụ n'ụdị ya, na Max ga-atụkwa ihe nlele ahụ Ruo nha kachasị nbipute nwere ike ibipụta.
Bugharia: Pịa Bugharia, ị ga-ahụ mgbanaka atọ n’elu ihe nlereanya ahụ, agba ndị ahụ na-acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha anụnụ anụnụ, na-anọchite anya anyụike X, Y, na Z. Debe òké ahụ na mgbanaka, Pịa aka nri pịa ma dọrọ nwere ike ime ihe nlere ahụ na ntụgharị ntụgharị nke akụkụ ụfọdụ, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụ naanị ndị ọrụ ga-agbanwe 15 ugboro n'akụkụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịlaghachi n'ọnọdụ mbụ, ị nwere ike pịa bọtịnụ Tọgharia na Spin Menu. Bọtịnụ Lay flat na-agbanwegharị ihe nlereanya ahụ na-akpaghị aka na ala, mana ọ naghị ekwe gị nkwa oge ọ bụla.
Enyo: Pịa na akụ anọ ma ọ bụ akara ngosi abụọ na-acha akwụkwọ ndụ iji gosipụta onyonyo mbụ. Ozugbo ahọpụtara ihe nlereanya ahụ, pịa bọtịnụ enyo na-enyo ihe nlereanya ahụ na axes X, Y, ma ọ bụ Z. Dịka ọmụmaatụ, a pụrụ iji ụdị aka ekpe gosipụtara ụdị aka ekpe.
Ejiri ntọala ntọala bupụta ntọala "Akwadoro" na "Omenala".
“Akwadoro” nwere ike understoodghọta dị ka Ndabere oke ntọala. Mbubata ihe nlereanya ma mee ihe nlereanya ntọala ahụ Pịa “Mpekere” iji bupụ Gcode. Enweghị mkpa ọ bụla mgbanwe na Mbido Mbido gị. Software dị na ndabara ọnọdụ.
Iji họrọ onye nbipute, a ga-atụnye onye nbipute na menu ndọpụta ya site na isi menu "Tinye igwe", ma ọ bụ na ọ gaghị egosipụta.
Ihe onwunwe. Ihe ndabara bu "PLA-T200". Ihe dị iche iche nwere ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ụdị ihe, ị nwere ike pịa, wee pịa "Ihe Njikwa ...", gbanwee ihe ọhụrụ, gbanwee ihe ọmụma, bipụta ntọala, wdg.
：0.1 na 0.2, bipụta nhazi nhazi, họrọ site na iji akara ahụ dọkpụpụta ntụpọ ojii. Nọmba ahụ na-anọchite anya ịdị elu nke oyi akwa ọ bụla. Obere ọnụọgụ dị na nhọrọ ahụ, ọ ka mma mbipụta, yana ogologo oge mbipụta. Ohaneze, 0.2, ma ọ bụ 0.2 mm n'ịdị elu, bụ ọsọ nbipụta ọsịsọ.
：Dejupụta ntọala. Dọrọ ntụpọ ojii na òké iji nweta nha nke uru ahụ. Debe ọnụego ndochi dịka mkpa ndị ahụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ibu ibu, ọnụego ndochi akwadoro nke 20%.
Kwado Gradient: Ọ bụrụ na enyere ya aka, njupụta njupụta ga-eji nwayọ nwayọ ka elu mbipụta na-abawanye.
: Irrefọdụ oge ufodu protrusions mkpa ka akwado maka mma ebipụta mmetụta. Ọ bụrụ na ejighị ya, mgbapụta ahụ ga-ada. Họrọ ya ga-emepụta usoro nkwado n'okpuru ihe nlereanya iji gbochie ihe nlereanya ahụ sagging ma ọ bụ bipụta na ikuku.
：Na-agbakwunye ebe dị larịị gburugburu ma ọ bụ n'okpuru ihe nwere ike belata. Mgbe enyocha nhọrọ a, arụ ọrụ Raft na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na anaghị enyocha ya, ọ nweghị mkpụrụ. A na-edozi ntọala ntọala ụfọdụ na ngalaba na-esote, "Bipute Ntọala Ntọala.".
Omenala oke ndepụta, ihe ngosi ndabara a na-ejikarị eme ihe, maka ntọala ndị ọzọ, biko pịa akụkụ ndị na-esote obere bọtịnụ bọtịnụ, dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ na-esonụ.
Enwere bọtịnụ "Slicing" na akuku aka nri nke isi interface. Mgbe edoziri ọnụọgụ iberi, ozi ọkwa ga-egosipụta "iberi", bọtịnụ ozugbo. Ọ na - ekwu "slicing ..." na - aga n'ihu, ma mgbe emechara ya, ọ na - agwa gị ego ole ị ga - eri, na mita (m), na gram (G) nke ihe.
Mgbe ịbubatara ihe nlereanya ahụ, ị ​​nwere ike pịa ihe nlereanya ahụ, wee pịa bọtịnụ nri aka nri, mmapụta aka nri pịa ọrụ, dị mfe iji rụọ ọrụ ihe nlereanya ahụ. Ọrụ ndị a bụ ndị a:
Center họrọ Model: Mgbe ihe atụ ahụ gbanwere, gbasawanye, gbanwee na arụmọrụ ndị ọzọ, ihe nlereanya ahụ adịchaghị mkpa n'etiti ikpo okwu, pịa nhọrọ a iji mee ngosipụta ihe nlereanya ahụ.
Hichapụ Họrọ Model: Hichapụ ihe nlereanya ahọrọ n'aka ekpe òké bọtịnụ.
Otutu Họrọ Model: Detuo ihe nlereanya ahọpụtara n'aka ekpe ekpe.
Họrọ Moddị niile: Họrọ ụdị nke gosipụtara na ikpo okwu. Clear Mee efere: Efu niile ụdị na ebipụta n'elu ikpo okwu.
Bugharịa ụdị niile: Ọ bụrụ na ị na-ihichapụ ihe nlereanya site na ikpo okwu gị na mberede, ịnwere ike iji atụmatụ a weghachite ihe nlereanya ehichapụ na mbipụta mbipụta ma gosipụta ya.
Modelsdị otu: họrọ ọtụtụ ụdị n'ime otu maka ịmegharị mfe na ịkpụkọta ọnụ.
Jikọrọ ọnụ elsdị: Na-ejikọta ụdị abụọ dịpụrụ adịpụ na otu, nke kachasị maka ibipụta agba agba abụọ. SPLIT Nlereanya: Gbanyụọ ihe nlereanya ahụ ejikọtara.
N'ime mbipụta otu agba, enwere naanị otu ihe na ngwa nbipute, yana nkwado ma ọ bụ ikpo okwu na-agbakwunye na otu ihe ahụ. Nzọụkwụ maka ịkpụ otu ihe dị ka ndị a:
Kwụpụ 1: Họrọ onye nbipute
Nzọụkwụ 2: Bubata ihe nlereanya ahụ
Kwụpụ 3: Tọọ ntọala ma ọ bụrụ na enweghị ihe ọpụrụiche pụrụ iche, ndabara mbipụta mbipụta nwere ike ịbụ.
Stepkwụ na 4kwụ 4: Slicing na Save
"Mpekere" dị n'akụkụ aka nri ala nke interface sọftụwia, kụchaa ihe nlele ahụ, mgbe emechara ya, pịa "Chekwa na Njikwa", faịlụ GCODE mepụtara ga-echekwa na diski ahụ.
Kwụpụ 3: Tọọ ntọala
Họrọ otu ụdị ma pịa aka nri na "Extruder 1:"
Họrọ otu ụdị ma pịa aka nri na "Extruder 2"
Kwụpụ 4: Jikọta ihe nlereanya ahụ
Pịa Pịa iji họrọ ụdị niile
Right pịa ma họrọ "jikota Model"
Pịa ihe nlereanya ahụ na pịa aka nri iji họrọ “Centerdị Achọpụtara ahọrọ”
Kwụ na 5kwụ 5: Slicing na Save
Na usoro gara aga, pịa "Mbelata" n'akụkụ aka nri ala nke sọftụwia ahụ, wee pịa "Chekwa na Njikwa" iji chekwaa ụzọ slicing ụzọ na diski
Họrọ “Isi Ihe Ngwaọrụ Laser”
Họrọ ”Eeh” imeghe EcubMakerLaser
Foto akwadoro maka sọftụwia a bụ: *. BMP, *. JPG, *. Png.
①：Isi menu. "Njikwa" menu gụnyere ịbubata faịlụ eserese, imeghe faịlụ ikpeazụ mepere yana ịchekwa 'Gcode'; “Asụsụ” enwere ike gbanwee n'etiti Chinese na Bekee, wee malitegharịa mgbe ịgbanwere; “Ọzọ” menu ekewapụrụ na "enyemaka n'ịntanetị," weebụsaịtị gọọmentị "na" sub-menu ".
Akwa Bicubic dị elu: Adabara ma ịmụba ọnụ na Mbelata, mepụta ezigbo oyiyi interpolating pikselụ.
Agbata Obi Dị Nso: Chebe oghere siri ike iji bulie onyonyo ahụ n’emeghị pịketị ọ bụla.
Grayscale na RGB sliders. Ọ bụrụ na imeghe onyogho agba, ntụgharị site na agba gaa grayscale dị mkpa. Nwere ike ịhọrọ n'etiti agba akọwapụtara na grayscale formula (Nkezi Mfe, Nkezi Ibu ma ọ bụ Ngosipụta Ngwaọrụ) ma ọ bụ họrọ nhọrọ "Omenala" ma jiri aka kọwaa akara nke mpaghara RGB ọ bụla.
Nke izizi HQ Bicubic Agbata Obi Dị Nso
“Omenala”Bara uru mgbe ị na-ebubata eserese eserese dị ka clipart, anyị chọkwara ijikwa ọchịchịrị / ịcha ọkụ nke agba ọ bụla.
Ihie, iche na BW n'ọnụ ụzọ. Site na nchapụta na iche iche ị nwere ike ịme ka ọchichiri ma ọ bụ mee ka onyinyo ahụ dị nro, yana ịbawanye ọdịiche.
Site na nhọrọ BW ị nwere ike ịgbalite ọnụ ụzọ na onyinyo ahụ: a ga-atụle pikselụ na-enwu gbaa nke ụzọ ahụ dị ọcha, ọchịchịrị ga-acha oji.
Nhọrọ ndị a niile na-emetụta otu ngwaọrụ dị iche iche si eme ihe oyiyi ma mepụta nsonaazụ ikpeazụ. Ebe ọ bụ na ihe dị iche iche na-akpa àgwà dị iche iche mgbe edere ha na laser, ọ dị mkpa igwu egwu na nhọrọ ndị a iji chọta njikọta kachasị mma maka nsonaazụ achọrọ.
③：Nwere “akara n’ahịrị” Ngwá ọrụ ị nwere ike kanye ihe oyiyi dị elu site na ezi ndo nke isi awọ. Rịba ama na ọ bụghị ihe niile osise e kwesịrị maka usoro a: ụfọdụ ihe anaghị eme linearly na laser ike ọgwụgwụ ha adị naanị dị ka ọkụ ma ọ bụ ọkụ ala na-eme ka o sie ike mụta nwa a grayscale. Na ndị a anyị na-atụ aro iji Ngwá ọrụ "ditinging".
④：Enwere ike ịhọrọ nduzi laser site na ntanetị, ogologo oge na ntụgharị. The ibu àgwà uru bụ, ihe ndị ọzọ ọ na-ewetara na mfe ọ bụ carbonize. Ya mere, enwere ike ịtọ ụkpụrụ dị iche iche dịka ihe dị iche iche si dị. N'ozuzu, ụkpụrụ ndị a tụrụ aro bụ ahịrị 10 / mm na 5 ahịrị / mm maka ihe osisi.
⑤：Nịm ọsọ ọsọ na oyiyi size. The osise ọsọ bụ ihe dị 300, nke nwekwara ike gbanwee dị ka n'ezie tụrụ ihe. Obosara na ịdị elu na-anọchi anya nha nke etu ihe osise ahụ si dị.
：Ratie 90 Celsius ：Rate 90 Celsius Counter-clockwise
：Tụgharịa oyiyi kwụ ：Tụgharịa oyiyi vetikal
：Ihe ubi ：Agba agba
：Gbanwee mgbanwe niile
⑦Ihe ngosi nyocha laser: Mmetụta dị mma dịtụ iche na nke bụ eziokwu. Foto nke mbu: webata foto izizi
⑨Mbubata: Bubata faịlụ foto; Mpekere: Gbanwee eserese n'ime faịlụ gcode nke akụrụngwa ghọtara; Chekwa: Chekwa dị ka faịlụ gcode.
Bitmaps: * .bmp, *. Png, *. Gif na * .jpg
Ihe eserese Vector (Optimizing): *
Isetịpụ ụkpụrụ ihe osise：
N'etiti ha: “Ogo” Ihe na-esiwanye ike, uru ka ukwuu bụ, ihe ngosipụta gosipụtara, na uru ọnụọgụ bụ 10.
Ọsọ ikuku. Na-anọchite ọsọ ọsọ nke isi laser na mpaghara na-abụghị ihe osise.
Ọsọ ọsọ: Na-anọchi anya ọsọ na-agagharị nke isi laser na mpaghara a kpụrụ akpụ. Uru a na-atụ aro maka ihe ndị na-eme ka ihe ndozi ghara ịdị elu.
Ha na faịlụ ndị na-akpụ：
Ọsọ ọsọ (mm / min)
Ogo (akara / m)
Mmaji ato plywood
A na-eji sọftụwia a maka sọftụwia ihe osise nke ihe ngosi TOYDIY nke Ecubmaker mepụtara. Nkwado ibubata vector map, bitmap, Gcode preview.
Họrọ ”CNC Ngwaọrụ ”
Họrọ ”Eeh” imeghe EcubMakerCNC
①：Button emeghe button. Ihe eserese Vector na-akwado mmeghe "*. SVG", "DXF". Bitmap faịlụ na-akwado "*. JPG", "*. JPEG" *. BMP "," *. GIF "," *. PNG ".
②：Mepụta ihe osise. Nwere ike ịmepụta ederede na ụdị dị mfe.
③：Bugharịa ihe osise ahụ. Ọ bụrụ na x na y karịrị 180mm wee pụọ na oke ikpo okwu, ogo ihe ngosi gosipụtara ịdọ aka na ntị ọbara ọbara.
④：Bugharia udi a. Ọ na-akwado 90 Celsius, 90 Celsius ọzọ, na-atụgharị, enyo kwụ ọtọ na enyo kwụ ọtọ.
⑤：Oke ntọala. Mee ihe osise ahụ, ihe omimi dị omimi na ibuli elu Z mgbe emechara ya. Mgbe mwube, Malitegharịa ekwentị ahụ na software na-mmetụta. Ọsọ a tụrụ atụ na-emetụta ihe atụ. Enwere ike ịtọ ọsọ ọsọ dị iche iche dị iche iche. Ohaneze, nke pere mpe, nke ka mma, mana ọ na-ewe oge ịbịaru.
⑥：Maka ngosipụta nke ụzọ efu, a ga-enyocha nhọrọ a mgbe ịbubata ma chekwaa eserese ahụ, ma ọ bụghị ya, ihe osise ahụ ga-abụ ihe na-ezighi ezi.
⑦：Mpaghara ngosipụta. Mpaghara nyocha.
Formatsdị eserese eserese a na-akwado bụ *. SVG na *. DXF, ma ọ bụghị ihe niile akwadoro eserese eserese nwere ike imeghe. Akwadoro ka iji *. DXF faịlụ.
Mara: N’ozuzu, a ga-emepe ụdị bitmap niile akwadoro, mana ụfọdụ bitmaps nwere oke gburugburu ha mgbe ebubatasịrị ha na ngwanrọ ahụ.
Tinye ederede ka ịmepụta nke a software anaghị akwado ọrụ nke ịmepụta enyemaka, ma na-enye ngwaọrụ iji mepụta enyemaka, ya bụ, njikọta nke 360 ​​nke ụlọ ọrụ Autodesk. Maka nkọwapụta, biko rụtụ aka na "fusion360 mepụta adreesị nbudata enyemaka" yana "fusion360 mepụtara nkuzi enyemaka".
A. Nsogbu na eserese (akara agba, ezoro ezo, wdg)
B. Ngwá ọrụ nsogbu na-amụba vector faịlụ.
Ohaneze na faịlụ bitmap n'onwe ya akara ma obu nsogbu agba.
A. Lelee na ngosi na-akpụ akpụ ụzọ nhọrọ na-enyocha.
B. Nwalee *. Faịlụ usoro SVG nke biara na ngwanrọ mbubata. Ọ bụrụ na ị nwere ike mbubata ahaziri oyiyi ọzọ.
5. Mgbanwe Asụsụ
Malitegharịa ekwentị ahụ na software
3D na-ebi akwụkwọ
Bụrụ onye nkesa
Copyright - 2014-2020: All Rights echekwabara.